आइसोलेसनबाट महामन्त्री डा. कोइरालाले भने : मेरो स्वास्थ्य बारे चिन्ता नगर्नु होला, दुई-तीन दिनमा डिस्चार्ज हुन्छु - Khabar Break | Khabar Break
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले आफ्नो स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको बताएका छन्।
उने आफू अझै २र ३ दिन अस्पताल बस्ने पनि बताएका छन्। ‘म कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएको व्यक्ति आज ओम नर्सिङ होममा आइसोलेसनमा छु। तपाईंहरुले चिन्ता गर्नुपर्दैन। दुई तीन दिन अझै यहाँ बसेर म डिस्चार्ज हुन्छु । यति नै भनौं भनेर’ उनले भने।
कोइरालाको फोक्सोमा निमोनियाको संक्रमण देखा परेको छ। डाक्टर कोइरालालाई क्लिनिकल ट्रायल अर्थात परिक्षणको रुपमा रहेको औषधि रेमडेसिभिर समेत चलाइएको छ। ‘उहाँलाई रेमडेसिभिर औषधी चलाइएको छ। त्यसको डोज पुरा हुन केही दिन त लाग्छ नै।
त्यसैले केही दिन औषधिको डोज पुरा गर्न पनि यहाँ बस्नुपर्ने हुनसक्छ,’ अस्पतालका प्रवन्ध सञ्चालक बाबुकाजी कार्कीले भने। ज्वरो आएपछि कोइरालालाई उपचारको लागि भदौ ३१ गते बिहान ६ बजे ओम अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो।
ओम अस्पतालका सिनियर कन्सल्ट्यान्ट फिजिसियन डा।विश्वनाथ कोइराला नेतृत्वको चिकित्सकीय टोलीले उनको उपचार गरिरहेको छ।
महामन्त्रीको उपचार डा कोइरालासँगै सिनियर कन्सल्ट्यान्ट पल्मोनोलाजिस्ट, डा सुबोध सागर ढकाल, कन्सल्ट्यान्ट इन्टेन्सिभस्ट डा प्रमेशसुन्दर श्रेष्ठलगायतको टोलीले गरिरहेको छ।